Nzọụkwụ 12 na Social Media Successga nke Ọma | Martech Zone
Ndị folks na BIGEYE, ụlọ ọrụ na-ahụ maka okike, nwere tinye ihe omuma a iji nyere ụlọ ọrụ aka ịmepụta usoro ịzụ ahịa mgbasa ozi na-aga nke ọma. Enwere m mmasị na nkwụsị nke usoro mana enwere m ọmịiko na ọtụtụ ụlọ ọrụ enweghị ihe niile iji nweta ihe dị mkpa maka usoro mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Nloghachi na iwulite ndị na-ege ntị na obodo na ị nweta nsonaazụ azụmaahịa nwere ike iwe ogologo oge karịa ndidi nke ndị isi n'ime ụlọ ọrụ ahụ.
Research ma mara ndị na-ege gị ntị, na-amata isiokwu na ọdịmma ha kachasị elekọta mmadụ.
Naanị họrọ iji jiri netwọk na nyiwe nke kachasị agwa ndị na-ege gị ntị okwu.
Kwuo nke gi igosi ihe ngosi (KPIs). Kedu ihe ịchọrọ ka mbọ ndị otu mmekọrịta gị rụzuru? Kedu ihe ịga nke ọma na-adị ka okwu ọnụahịa?
dee akwukwo egwu ahia nke ndi mmadu. Akwụkwọ egwu ahụ kwesịrị ịkọwapụta KPI gị, profaịlụ ndị na-ege ntị, akara njirimara, echiche mkpọsa, mmemme nkwado, asọmpi, isiokwu ọdịnaya, usoro njikwa nsogbu, wdg. Mara na atụmatụ ahụ kwesịrị ịbụ ihe pụrụ iche na ikpo okwu.
Mmezi ndị otu ụlọ ọrụ gị gbara gburugburu atụmatụ a. Kenye ibu ọrụ dị ka onye na-eziga, onye na-aza, na otu esi akọ usoro.
Were nkeji 30-60 na mbido izu ọ bụla ma ọ bụ ọnwa iji hazie oge tweets, Facebook posts, LinkedIn posts, pin, ma ọ bụ ọdịnaya mgbasa ozi ndị ọzọ. Ndị a nwere ike ịbụ echiche mbụ, njikọ nke ọrụ gị, ma ọ bụ njikọ na ọdịnaya ndị dị na mpụga nwere ike ịba uru ma ọ bụ masịrị ndị na-ege gị ntị.
Mepụta akụ ọdịnaya site na iji mpempe akwụkwọ na ịhazi atụmatụ ọdịnaya, isi okwu, njikọ metụtara ya, ịhazi usoro achọrọ, aha ndị edemede, yana mpaghara maka nnabata njikwa na ahịrị niile.
Post ọdịnaya dị mkpa metụtara isiokwu dị iche iche na akụkọ kwesịrị ekwesị n'oge kwesịrị ekwesị. Ọ dị mkpa ịkekọrịta echiche dị iche iche ozugbo akụkọ pụtara.
Na-emeso ha niile elekọta mmadụ ọwa iche. Ikwesighi izipu otu ozi n'ofe ọwa niile - cheta onye na - ege ntị n'azụ ikpo okwu ọ bụla.
Kenye mmadụ iji mee ihe dị ka onye ọrụ ndị ahịa na-anabata azịza nke onye ọrụ na enweghị ya. Elegharala okwu na nzaghachi anya!
Hazie akụkọ! Dabere na ebumnuche gị, usoro mkpesa nwere ike ime kwa izu, kwa ọnwa, ma ọ bụ kwa ọnwa.
Tụgharịa uche atụmatụ gị kwa oge. Ọ bụrụ na ihe dị na atụmatụ gị anaghị arụ ọrụ, gbanwee ya ma ọ bụ ọdịnaya A / B iji chọpụta ihe ndị na-ege gị ntị na-aza nke ọma.
Tags: profaịlụ profaịlụbigeyeika personasmkpọsa echicheakụ ọdịnayagburugburu ọdịnayaisiokwu ndị dị na yan'asọmpiusoro nchịkwa nsogbuNdị ọrụ nlekọta ndị ahịaakụkọigosi ihe ngosikpisnkwado ihenjikọ njikọusoro ihe omumeọhanezeọrụ ndị ahịamgbasa ozi mgbasa oziusoro mgbasa ozi mgbasa oziakụ mgbasa ozi ọdịnayaọrụ ndị ahịa soshal midiaelekọta mmadụ mgbasa ozi KPIsnetwọk mgbasa ozi mmekọrịtaakwụkwọ mgbasa ozi ọha na ezemgbasa ozi mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa ozinnyocha mgbasa ozi mmekọrịtausoro mgbasa oziusoro mgbasa ozi mmekọrịtausoro mgbasa ozi ọha na ezenzọụkwụ